Tag: ụgwọ ọrụ ndị ahịa | Martech Zone
Tag: ụgwọ ọrụ ndị ahịa
N'inwe ọdịnihu akụ na ụba a na-ejighị n'aka, ọ dị oke mkpa na azụmaahịa na-elekwasị anya na njigide ndị ahịa site na ahụmịhe ndị ahịa na ụgwọ ọrụ maka iguzosi ike n'ihe. M na-arụ ọrụ na mpaghara nnyefe nri na usoro ụgwọ ọrụ ha mepụtara na-aga n'ihu na-eme ka ndị ahịa na-alọghachi ugboro ugboro. Ọnụọgụ ndị ahịa nke iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa Dị ka akwụkwọ akụkọ Whiteian, Buildingmepụta Iguzosi Ike n'Ihe Nleba Anya na World Cross-Channel: 34% nke ndị bi na United States nwere ike ịkọwa dị ka ndị na-eguzosi ike n'ihe nye ndị 80% nke ndị na-eguzosi ike n'ihe na-ekwu
Anyị hụrụ swag n'anya. Agencylọ ọrụ na-ere ahịa anyị na-azụ ahịa nyere iwu ka anyị nwee swag mbụ n'afọ gara aga - obere akwụkwọ ndetu mara mma maka ndị bịara ọgbakọ. N'afọ a, anyị zụtara ụfọdụ draịvụ USB 2Gb dị jụụ bụ otu ọdịdị na ogo nke igodo ka i wee tinye ha na keychain. Ọ bụrụ n ’ịkwụsị n’ụlọ ọrụ anyị, ị nwere ike nweta otu! Kedu ihe bụ swag? Ọ bụ ngwongwo, ịkwakọrọ, ihe nkwata, ịkwakọrọ… akụ̀ ị nwetara n'aka ụlọ ọrụ na nkwụghachi